Shina: nifindra ho an’ny Hong-Kong ny google.cn · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2010 21:51 GMT
Nanapa-kevitra ny handao an'i Shina ihany ny Google. Vantany vao nahavita ny fanambarana ny Google dia nitsahatra tamin'ny fnaovana sivana ny tadiavina amin'ny milin-karoka ao amin'ny google.cn amin'ny familiana hankany amin'ny google.com.hk. Ao amin'ny bolongana ofisialin'ny Google i David Drummond, lehiben'ny fiandraiketana ny lafiny lalàna no manazava fa ny anton'izao fanapahan-kevitra izao dia noho fitakian'ny fitondram-panjakana Shinoa fa “fepetran-dalàna tsy azo iadian-kevitra” ny fanaovan'ny tena sivana ho an'ny tena ihany. Na izany aza dia mbola hanohy ny asany any Shina ihany ny sampana [fikarohana sy fampandrosoana?] R&D ao amin'n'ny Google.
Etsy ankilan'izany kosa dia nanambara i Shina (amin'ny alalan'ny Xinhua) fa “nandika ny fampanantenana voarakitra an-tsoratra” ny Google ka “diso tanteraka” tamin'ny fanajanonana ny sivana.
Na izany aza dia iharan'ny voambolana voahidin'ny Rindrim-ben'i Shina [Great Fire Wall] ny google.com.hk, raha mbola azo jerena ny valany [domaine] any Shina. Navoitran'i Rebecca MacKinnon fa any an-tokotanin'ny fitondranam-panjakana ny baolina izao:
Na dia efa nisy ihany aza ny siosio handehanan'ny Google, dia maro ny mpiserasera Shinoa nonalahelo rehefanahare ny vaovao. Jason Ng avy ao amin'ny Kenengba, ohatra, nanatsafa ny mpisioka an-tserasera Shinoa amin'izao fanapahan-kevitry ny Google izao ary nahazo valiny mihoatra ny 100. Indro ny fehin'ny hitany:
11 Aogositra 2010, 20:27